Solitaire: Treasure of Time 1.29.1702 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.29.1702 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
ဂိမ္းမ်ား ကဒ္ Solitaire: Treasure of Time
Solitaire: Treasure of Time ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ပျင်းစရာ, uninventive ကဒ်ဂိမ်းများ, ဖှယျ mahjong ပဟေဠိများနှင့်ပင့်ကူ solitaire Clone ပင်ပန်းနေပြီလား အားလုံးကတော့မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးသွားနေပါသည်! တစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောလေ့လာရေးခရီးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါနှင့်ကြွယ်ဝသောမူရင်း storyline, စိတျလှုပျရှားစရာ Quest များနှင့်ဖြစ်မည်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူဤစွန့်စား Saga အတွက်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုပထမဦးဆုံးလက်ကိုသင်ယူ!
အဆိုပါချစ်စရာနှင့်လိမ္မာပါးနပ်ခွေး Arny ဂိမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးခမ်းနားဗိမာနျတျော၏အပျက်အယွင်းအတွက်, သင်ကလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော့ချက်င်တစ်ဦးရင်ဘတ်ရှာပါ။ ဘယ်တံခါးကိုဖွင့်ပါသလဲ? ပတ္တမြားဒေသခံလမ်းပြဒီမှော်ကို item အတိတ်လမ်းကိုသော့ဖွင်နိုငျကွောငျးဆိုပါတယ် ...
•အချိန်ပေါ်တယ်: ပြီးပြည့်စုံသောအတိတ်တွင် solitaires နှင့်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု၏နက်နဲသောအရာမိတ်ဆက်ဖို့ပစ္စုပ္ပန်။
•အများဆုံးရှုပ်ထွေးဖို့အရိုးရှင်းဆုံးဂန္သူတွေကိုထံမှကျော် 300 အမျိုးမျိုးသောသစ်ကို solitaires,!
•အံ့သြဖွယ် collection များကိုအများကြီး: ရှားပါးအပိုငျးအတှေ့ရနှင့်အချိန်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလူမျိုး၏အစစ်အမှန်သမိုင်းတွေ့ရှ။
•အမျိုးမျိုးသောဂိမ်း Modes သာမှတဆင့်ဗုံးမှ: တုံ့ပြန်မှု-based blitz ပဟေဠိ, သည်းခံခြင်းနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုမလိုအပ်ကြောင်းဧရာ solitaires, သင်ကအမည်!
•-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှမ Adventures! အဆိုပါလက်လှမ်းမမှီပါသောတောင်ပေါ်ထိပ် Explore, အ scarab ဖြည့်ပိရမစ်ရှာရှင်ဘုရင်၏သင်္ချိုင်းဂူကိုရှာဖွေ, သင်သည်မရေမတွက်နက်နဲသောအရာ untangle အဖြစ်ကဒ်များအဆုံးမဲ့ကုန်းပတ်မှတဆင့်မွှေ။
Solitaire: Treasure of Time အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Solitaire: Treasure of Time အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Solitaire: Treasure of Time အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
paul-julian-gould စတိုး 1.66k 378.24k
Solitaire: Treasure of Time ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Solitaire: Treasure of Time အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.29.1702
ထုတ်လုပ်သူ Game Insight
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.game-insight.com/site/privacypolicy
လက်မှတ် SHA1: 22:33:04:FE:B3:13:77:C4:0A:4C:85:96:7D:BC:3B:24:43:CC:86:68
Solitaire: Treasure of Time APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ